Air New Zealand waxay ku darsataa $ 1 milyan doolarka deynta dhulka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand waxay ku darsataa $ 1 milyan doolarka deynta dhulka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Waxaa laga yaabaa 2, 2019
Air New Zealand iyo macaamiisheeda waxay ka iibsadeen in ka badan NZD $ 1 milyan oo kaarboon dejin ah mashaariicda dhirta joogtada ah ee New Zealand iyada oo loo marayo barnaamijka iskaa-wax-u-qabso ee kaarboonka shirkadda, FlyNeutral.
Barnaamijkan oo dib loo bilaabay dhamaadka 2016 ayaa macaamiisha shirkada siinaya ikhtiyaar ay ku jaangooyaan qiiqa kaarboonka laxiriira duullimaadyadooda markay khadka ka dalbayaan. Lacagaha la ururiyey dhammaantood waxay si toos ah ugu socdaan iibsashada dhibcaha kaarboon ee la caddeeyey, oo gacan ka geysanaya ka saarista kaarboonka jawiga.
Dhibcaha kaarboonka waxaa laga iibsadaa mashaariic badan oo kaymo joogto ah oo ka diiwaangashan Dowladda New Zealand oo hoos timaad Initiative Sink Initiative, iyo in yar oo ka mid ah mashaariicda tamarta joogtada ah ee caalamiga ah. Kaymaha waxay ku yaalliin guud ahaan New Zealand, laga bilaabo Northland, ilaa Jasiiradaha Chatham, ilaa Wellington City Council-ka Dibedda Green Belt iyo Hinewai Reserve ee Banks Peninsula.
Madaxa Joogtada ee Air New Zealand Lisa Daniell ayaa sheegtay inay ku faraxsantahay in diyaarada ay awood u siiso macaamiil inay mas'uuliyad weyn iska saaraan dib u habeynta qiiqa kaarboonka iyo sidoo kale taageerida dhiraynta New Zealand.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno barnaamijka oo gaadhay heerkan ugu horreeya iyada oo taageerada macaamiisheena. Isbadalka Cimilada waa arin caalami ah oo deg deg ah, shirkad diyaaradeed ahaan waxaan ognahay inay tahay inaan doorkeena ka qaadano xal u helida. Ku siinta macaamiisheena hab fudud oo lagu jaangooyo qiiqa kaarboowga la xiriira safarka hawada waa hal dariiqo oo tan lagu sameeyo.
Sida wax kasta oo noocan ah leh waa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda ah. Sanadkii la soo dhaafay waxaan jabinay 8,700 tan oo kaarboon ah annaga oo ka wakiil ah dhammaan shaqaalaheena u safray shaqada, waxaana sida muuqata jeclaan lahayn in aan aragno xitaa safarro badan, oo ay ku jiraan kuwa safarka ganacsi ku soo biiraya, oo nagala qayb qaadanaya qiiqa qiiqa mustaqbalka.
Kaymaha Joogtada ah NZ Partner Ollie Belton waxay leedahay barnaamijka FlyNeutral ee Air New Zealand wuxuu gacan ka geysanayaa abuuritaanka suuq xoogan oo loogu talagalay dhirta joogtada ah ee wadaniga ah iyo dhisida faham weyn oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay abuuritaanka New Zealand ka wanaagsan jiilalka soo socda.
Mashaariicda dhirta dabiiciga ah ee loo xushay in lagu isticmaalo gudaha FlyNeutral portfolio waxay matalayaan waxyaalaha kaarboon ee ugu sarreeya marka lagu daro caawinta yareynta saameynta isbeddelka cimilada, waxay hagaajin kartaa dhowrista sidoo kale waxay sare u qaadi kartaa kaydka bulshada iyo madadaalada sababtoo ah joogitaankooda. Aad ayey u fiicneyd in lala shaqeeyo Air New Zealand iyo milkiileyaasha dhulka si ay u awoodaan inay muujiyaan una taageeraan mashaariicdan. ”
Barnaamijka FlyNeutral ee iskaa-wax u qabso ee kaarboon-ka-duulimaadku wuxuu ka sarreeyaa oo ka sarreeyaa waajibaadka sharci ee qiiqa kaarboonka ee Nidaamka Ganacsi ee Qiiqa Qiiqa New Zealand, oo ay Air New Zealand lafteeda la kulanto.
Laga soo bilaabo 2018 Air New Zealand macaamiisheeda iyo macaamiisha dowlada sidoo kale waxay awood u yeesheen inay dib u habeyn ku sameeyaan qiiqa kaarboonka ee barnaamijka ku jira. Shirkadda ayaa sidoo kale dib u habeyn ku sameysa qiiqa iyadoo ka wakiil ah shaqaalaheeda u safraya shaqada.